काग तिहार: धनतेरसमा के किन्ने के नकिन्ने ? शुभ अशुभ हेर्नुहाेस् | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काग तिहार: धनतेरसमा के किन्ने के नकिन्ने ? शुभ अशुभ हेर्नुहाेस्
प्रकाशित मिति १९ कार्तिक २०७५, सोमबार ०७:०० लेखक नेपाली जनता
आफ्नै आमाले गरिन् चर्पीमा डुबाएर दुई सन्तानको हत्या
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथिभरा याङबरक वडा नम्बर २ की एक आमाले आफ्नै दुई छोरीलाई शौचालयभित्र दिशामा डुबाइएर हत्या गरेकी छिन्…
सांसदलाई ६ करोड नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा सांसदलाई ६ करोड बजेट नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।
सत्ता नै नरहने रिपोर्ट दिंदा गुप्तचर प्रमुखको जागिर चट्
काठमाडौं । सरकारले देशको गुप्तचरी गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ‘राअवि’का प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई हटाएर नयाँ गुप्तचर प्रमुखको नियुक्ति…
‘फेसएप’बाट गोपनीयतामा प्रश्न, अनुसन्धान गर्न एफबीआईलाई आग्रह
काठमाडौं । अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदनका प्रतिपक्षी दलका नेता चक शुमरले ‘फेसएप’माथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पुरानो बसपार्कमा २९ तलाको भवन नबन्ने पक्का !
काठमाडौं । पुरानो बसपार्कमा बनाउन लागिएको ‘काठमाडौं टावर’ २९ तलाको नबन्ने पक्का भएको छ । रत्नपार्कनजिकै ठगिने ‘काठमाडौं टावर’…
को पुग्ला फाईनल ? इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै5views